Gabadh Muslimad ah oo sheegtay in shaqo la siiyay markii ay xijaabka dhigtay - BBC News Somali
Gabadh Muslimad ah oo sheegtay in shaqo la siiyay markii ay xijaabka dhigtay
Image caption Dadka laga tirada badanyahay ee Britain ayaa sheegay in la takooro marka ay doontaan adeegyada dowladda
Saddex qof oo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badanyahay ee Britain ayaa BBC-da u sheegay in ay aaminsanyihiin kala soocda xagga isirka uu saamayn xoog ku yeeshay noloshooda.
Mid ka mid ah dadkaas waa gabadha lagu magacaabo Shazia Khan oo ku sugan magaalada Birmingham, waxayna sheegtay in ay shaqo heshay kaliya markii ay iska dhigtay xijaabkii ama masarkii madaxa u saarnaa.
Dhawaan ayay wakaalad dowladda Britain ka mid ah daabacday xog la xiriirta isu dheelitirnaanta ka jirta xagga waxbarashada, caafimaadka , shaqooyinka iyo waliba sida booliska iyo maxkamadaha ay ula dhaqmaan dadka gudaha dalka Britain.
Shazia oo 33 jir ah ayaa qamaarka madaxa u xiran jirtay sababo la xiriira diinteeda Islaamka oo faraysa in ay dumarka madaxa dabooshaan.
Haweenay si jeesjees ah Xijaab ugu xiratay Sanetka Australia
"Waxaan imtixaan u galay illaa 6 shaqo , mana ku guuleysanin, waxaan ogaaday in dadka siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyada oo lagu salaynayo magaca qofka, diintiisa , isirkiisa iyo waliba dharka uu xiranyahay" ayay tiri Shazia.
BBC-da waxa ay sidoo kale la kulantay Morris oo ah nin kasoo jeedda qoowmiyadda dadka madoow, wuxuuna sheegay in shaqadiisii dowladda hoose hormarkii uu ka gaari lahaa la hakiyay sababo la xiriira midabkiisa.
"Waxaan u xilsaarnaa dhaqangalinta siyaasadaha cusub, oo ay ka mid tahay in aan dajiyo miisaaniyadda, balse markii dambe waxa ay agaasime u magacaabeen qof kale shaqadii aan aniga markii horeba qabanayay" ayuu yiri.
"Shaqada waxa ay u qaateen gabadh caddaan ah oo aad iiga darajo hoosaysa, taas oo xitaa aanan aaggeena ka shaqayn jirin, islamarkaasna aanan aqoonin sida wax u shaqeeyaan" ayuu intaas ku daray.
Morris waxa uu sheegay in inkasta oo uu magaalada uu ku suganyahay tahay magaalo dad badan oo kala dhaqamo duwan ay ku noolyihiin, haddane aanan la heleynin hal qof oo madoow ah oo agaasime meel ka ah.
Lahaanshaha sawirka RAJESH KUMAR TEWARI
Image caption Rajesh ayaa ka mid ah dadka takoorka dareemaya
Rajesh Kumar Tewari waa 42 jir, mardhow ayuu qaatay shahaadada labaad ee jaamacadda, isaga oo bartay cilmiga dambi baarista oo uu xitaa buundooyin sare ka helay.
Waxa uu BBC-da u sheegay in markii uu tagay xarun dadka shaqo doonka ah oo London ku taalo uu ninkii uu la kulmay u sheegay in uusan lahayn wax fursad ah oo uu shaqo ku helo.
"Waxaan doonayay in aan shaqo u raadsado Booliiska, nabad sugidda iyo gurmadka, balse ninkii la taliyaha waxa uu igu yiri caqli isu yeel, ma heleysid" ayuu yiri Rajesh oo intaas ku daray in intuba uu shaqo ka waayay.
"Ninkii la taliyaha ahaa ee aan la kulmay waxa uu iisoo jeediyay in aan shaqo ka raadsado dhanka adeegga macaamiisha" ayuu yiri Rajesh.
Baarlamaanka Jermalka oo mamnuucay indho shareerka
28 Abriil 2017
29 Sebtembar 2017
Caro ka dhalatay dumarka sucuudiga oo xusay Maalin Qaran